loo dhiso kala - Global kala Supply 877-776-4600
loo dhiso kala2019-03-14T09:19:30-04:00
Waa maxay kala ah
kala duwan waxa uu leeyahay saddex shaqo:
Si aad ujeedadoodu tahay awoodda engine ee giraangirihiina
Si aad u gudbiyaan awood u leeyahay inuu giraangirihiina halka ogolaanayo in ay isku shaandheyn xawaare kala duwan
Ku-simidda xilka hoos u marsho final ee gaariga, gaabis xawaaraha wareeg waqtiga kama dambaysta ah ee la isugu gudbiyo oo keliya horteeda waxaa ku dhufan giraangirihiina
Waa maxay farqiga u dhexeeya caadiga ah / kala duwan furan oo kala duwan ah warqada ku koobnayn?
Iyada oo kala duwan caadiga ah ama furan, kala duwan ee awooda in ay wheel la kulma iska caabin ah ugu yaraan soo diri doonaa marka uu aqrinayo quruurux dabacsan ama baraf, tusaale ahaan. A duwanaanshaha warqada kooban, si kastaba ha ahaatee, gudbin doonaa awood dheeraad ah si ay u wheel in aan daadgureyntaasi. Dad badan ayaa u isticmaali PosiTraction dheer ee kala duwan ah warqada kooban.
Sidee baan ku ogaan waxa aan ratio marsho waa?
Your dariiq dhexaad ratio marsho go'aaminaya inta jeer ee aad driveshaft isku bedbedeli doono, waayo, wareeg kasta taayirrada buuxa. ratio marsho ayaa inta badan waxaa lagu garan karaa code VIN gaariga ama ku qoran tag dariiq dhexaad ah. saarayaasha qaar ka mid ah, laga yaabaa in aanay ka mid ah macluumaadka ku VIN ah. ratio ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa qeybi tirada ilkaha on marsho giraanta by tirada ilkaha on marsho pinion ah.
[ Ilkaha Ring Gear / Ilkaha Pinion Gear ] = [ 41 / 11 ] = [ 3.73 ]
Calculator saamiga GEAR
Xisaabi aad ratio marsho hoos by galaan tirada ilkaha on your giraanta marsho & pinion marsho.
Gear Beddelidda Talooyin
Taayirada weyn ma aha sababta kaliya ee laga yaabaa in aad u baahan tahay in la beddelo geerka:
Milkiilayaasha gaari xamuul ah oo badan ayaa ku bedelan geerka waayo masaafada wanaagsan.
Haddii gaadhigaaga waa 4 a×4, waxaad u baahan doontaa in la beddelo geerka ku yaala xagga hore iyo xagga dambe oo ulahooda wareejiya.
Inta badan oo ulahooda wareejiya hore u baahan geerka cut dambe sababtoo ah driveshafts hore caadi ahaan ayna miiqdaan jidka kale.
geerka hore iyo xagga dambe ka duwanaan karaa by 1% jidka iyo 2% off-road aan raad qaab.
Sida loo aqoonsado Your kala
Waxaa jira labo siyaabood si loo ogaado faraqa gaari. Habka koowaad waa in la isticmaalo tirooyinka dariiq dhexaad ah. Tani waxay iman kartaa mid ka mid ah qaab tag dariiq dhexaad ah oo la xidhay gal dariiq dhexaad la handarraabbadeedii kala duwan ee, ama la stamp dariiq dhexaad ah tuujiyey kala duwan laftiisa dabooli. Nasiib darro tags ID ma yihiin had iyo jeer bayaan ah. If your ID tag can’t be read you can identify your differential by the number of cover bolts, qaabka kala duwan ee daboolka, tirada handarraabbadeedii marsho giraanta, iyo dhexroor giraanta marsho. Waxay sidoo kale lagu ogaan karaa in qaybta dhexe waa design muhiim ah ama tagidda. Farqiga calaamadaha Saaqidnimada ayaa sidoo kale loo gudbiyo xubnaha sida 3aad ama bocorka. Haddii ay dhibaato kaa haysato aqoonsashada aad kala duwan, na siin call a, waxaana ku faraxsanahay in ay caawiyaan.
Dooro samaynaysaa hoos:
Farqiga calaamadaha, Ring iyo Pinion, Crown Wheel iyo Pinion, cusub, used, rebuilt and exchange. Mid ka mid ah call waxa oo dhan sameeyo. We have all models in stock ready to ship worldwide today. Mid ka mid ah call noogu iyo waxaan ku siin karaan maraakiibta caalamiga ah.
Our experienced staff can help you find the Differentials you are looking for. If you don’t see the Differentials you need on our website, fadlan naga soo wac 877-776-4600, we will be glad to assist you